Vagadziri vachakwanisa kugadzira echinyakare mafomu ezvikoro | Ndinobva mac
Vagadziri vanozokwanisa kugadzira echinyakare kunyorera zvikoro
Chinhu chakakosha cheApple vagadziri. Iwo makambani kana vanhu vamwe avo Nekuda kwekuedza kwavo, kuzvipira uye nebasa, ivo vanokwanisa kugadzira kunyorera izvo vashandisi sesu vanofarira gare gare. Mazhinji emabheas anosunungurwa ndeawo, kuitira kuti vagone kuchinjisa izvi zvisikwa kune matsva masystem ekushandira ari kuda kusvika pamusika. Apple inobvumidza aya maapplication kuti aoneke muchitoro akagadzirirwa akasiyana madhivhisi, sekureba sekunge vanosangana nezvimwe zvidiki uye vanosangana nechinangwa.
Chimwe chezvinangwa zvine simba zveApple kuzvipira kwayo kubazi redzidzo. Ndosaka izvozvi kambani yeCalifornia yazivisa kuti vanogadzira vachakwanisa kugadzira zvetsika zvikumbiro zvezvikoro zvedzidzo.
Dambudziko idzva kune vanogadzira: Zvikumbiro zvezvikoro zvinoenderana nemushandisi wekupedzisira
Apple inobatanidzwa zvakanyanya nehurongwa hwedzidzo, kunyanya muUnited States. Mipiro mibairo kune izvo zvikoro kana masosi edzidzo anosangana nezvimwe zvidiki uye vanozvipira kukambani. Akaita zvipo zvakawanda kuzvikoro zveMac makomputa kuitira kuti vadzidzi vake vagone kuchinja muzvidzidzo zvavo ... nezvimwewo
Northeast Mississippi University yakapihwa naApple
Yakanga iri nyaya yenguva Apple asati abvumira vanogadzira simba gadzira zvikumbiro zvinoenderana nechimwe nechimwe chezvikoro izvi kana masangano. Kuchengeta mupfungwa kuti hazvisi nzvimbo dzese dzine zvido zvakafanana kana zvimwewo.
Kuburikidza nesitatimendi pane yewebhusaiti yekuvandudza, izvi inogona kupa zvakagadziriswa manyorerwo kuzvikoro zvekudzidzisa kuburikidza neApple Chikoro Manager. Vagadziri vanogona kuziva masangano kuburikidza Chitoro Chekushandisa Unganidza uye uvape kugona kutenga iyo tsika app kuburikidza neApple Chikoro Manager. Asi zvinotaurwa zvakare kuti masangano edzidzo anogona kutora mukana weichi chiitiko kugovera izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa mukati.
Kubva pane izvo zvinogona kuverenga uye sekutaura kwevaAmerica iri "kukunda kuhwina". Kukunda-kukunda dhizaini. Vagadziri vanogona kutarisisa pane yakakura uye yakatarisana nevatengi tarisiro nepo zvikoro zvichikwanisa-kugadzirisa mapurogiramu kuti ave akatonyanya kubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vagadziri vanozokwanisa kugadzira echinyakare kunyorera zvikoro
Apple inoda kuyedza mhando nyowani dzeGPS kuApple Park